नेपाली कामदार जापान पठाउने गृहकार्य कहाँ पुग्यो ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाली कामदार जापान पठाउने गृहकार्य कहाँ पुग्यो ?
काठमाडौं, माघ २३ । जापानमा नेपाली कामदार पठाउने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ । आगामी अप्रिलबाट कामदार जापान पठाउने गरी दुबै देशले आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । यसका लागि नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल र जापान सहमत भइसकेका छन् । हाल नेपाल कामदार लैजान जापानले पठाउने मोडालिटीको प्रस्ताव कुरिरहेको छ ।
यो विषयमा जापानको ठोस प्रस्ताव आएपछि दुई दशेबीच कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर आपूर्तिबारे समझदारी हुने उनले बताए । तत्कालै पाइलटिङका रुपमा अप्रिलबाट कामदार पठाउन सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।
श्रम सचिव दाहाल जापानले कामदारको ज्ञान तथा अनुभव र विशेषज्ञ सीप परीक्षण गर्ने गरी दुई खाले विधि प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको हकमा जापानले छुट्टै संयन्त्र र विधि निर्माण गर्न नसक्ला, अन्य कामदार श्रोत मुलुकसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्थाबाटै नेपालमा श्रमिक भर्ति हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यो विधि कामदारको हित अनुकुलकै हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । अनलाइनखबरबाट